आजबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा, जानि राख्नुहोस् कहाँ कहाँ कत्ति छुटमा के के सामान खरिद गर्न सकिन्छ ? – RemitKhabar
काठमाडौं । नजिकिएको दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले आज अर्थात असोज १५ गतेबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको उक्त सुपथ मूल्य पसल उपत्यकाको ५ ठाउँ र उपत्यका बाहिर २४ स्थानमा सञ्चालन हुनेछ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका देशभर रहेका कार्यालय, डिपो, डिलर तथा घुम्ती पसलमार्फत् सुपथ मूल्य पसल सुरु गरिएको हो ।
सहुलियत पसलमा चामलमा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ, नुनमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ, बासमती चामल, गेडागुडी र कर्णालीको सिमीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ छुट पाइने छ ।
त्यस्तै च्यांग्र्रा र खसी–बोकामा जिउँदो मूल्यमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ताहरुले डीडीसी घिउमा प्रति लिटर ३० रुपैयाँ छुट पाउने छन् ।
कहाँ कहाँ रहन्छन् सुपथ मूल्य पसल ?
कम्पनीका अनुसार थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु, लगनखेल र सूर्यविनायकमा रहेका बिक्री काउन्टरबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । उपत्यकाबाहिर भने बनेपा, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा, बागलुङ र भैरहवामा यस्ता पसल सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले टिकापुर, कृष्णनगर, दाङ, सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, दिपायल, डँडेलधुरा, बैलौरी र त्रिशूलीमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।